Prezidaantiin Somaaliyaa Mummicha Ministeera Biyyatti Hojii Dhaabsiisan
prezidaantii Somaaliyaa MOhaammed Abudullaahii Mohaammed
Prezidaantii Somaaliyaa fi Mummicha Ministeera biyyatti gidduu adda addummaan siyaasaa jiru hammaatee Prezidaant Abdullahii Mohammad, Mummicha ministeeraa biyyatti Mohammad Robalee akka hojii dhaaban gochuu isaanii lbasn.
Dubbii himaan prezidaantii biyyatti akka jedhanti, seeraan ala lafa uummataa bituu keessaa mummichi ministeeraa kun harka qabaachuu isaanii qorannaa gaggeeffame waan agarsiseef prezidaantichi tarkaanfii kana fudhatan.
Prezidaantiin somaaliyaa beekaa filannoo paarlaamaa irratti shiira jechuun mummichi ministeeraa eega himatanii guyyaa tokko booda hojii akka dhaaban ta’e.
Rooytars akka gabaaseetti, humnootiin nageenyaa mana jireenyaa mummicha ministeera Somaaliyaa marsanii kan jiran yoo ta’u, kana gochuun immoo karaa biraan fonqoolcha mootummaa gaggeessuu dha jechuun, itti aanaa ministeerri odeeffannoo biyyatti dubbatanii jitu.
Hogganoonni yeroo dheeraaf wal hadheessaa turan kun, gara jalqaba waggaa kanaatti, jiloonni 101 kanneen miseensoota paarlaamaa kanneen hogganaa biyyatti isa itti aanuu filatan qabaaachuuf walii galanii turan.
Falmiin Farmaajoo fi Robalee giddutti uumamee kun, sodaa hokkaraa garee Al-Qaayidaa isa Al Shaaabtti hidhata qabu biraa dhaga’amuu mootummaan irratti qiyyaafatee akka hin hojjanne taasisaa jechuun taajjabdonni akeekkachisanii jiru.